एक्लोपन कति खतरनाक ? कति फाइदाजनक ? - Saptakoshionline
एक्लोपन कति खतरनाक ? कति फाइदाजनक ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३०, २०७५ समय: १५:४०:२८
मानिस सामाजि प्राणी अर्थात् सोसल एनिमल हो । यसकारण पनि ऊ एक्लै जिन्दगी बाँच्न सक्दैन । मानिसँग घुलमिल, बातचीत, घुमघाम यी सबै मानिसलाई एक्लोपनबाट टाढा राख्ने माध्यम हुन्, जुन जरुरी पनि छ ।
तर, यसको विपरित यदि कोही एक्लै हुन्छ, भेटघाटमा सरिक हुँदैन, अरु मानिसँग समय व्यतित गर्न रुचाउँदैन भने यसलाई एक समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यही कारण होकि, एक्लोपनलाई सजायको रुपमा प्रयोग गरिँदैछ । मान्छेलाई जेलमा एक्लै कैद गरेर राखिन्छ । मानसिक बिमारीलाई पनि जन्जीरले बाँधेर एक्लै राख्ने गरिन्छ ।यसकारण एक्लोपन खतरनाक हो ।
आज तमाम देशमा एक्लोपनलाई बिमारीको संज्ञा दिइँदैछ । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि मान्छेले मान्छेलाई नै मनोवैज्ञानिक सल्लाह लिन सुझाव दिइरहेका छन् ।
धेरैजसो मान्छेले यसको जवाफमा ‘नो’ भन्न रुचाउँछन् । उनीहरू पार्टी, समारोहमा जानुपर्दा अप्ठ्यारो महसुस गर्छन् । सकभर अरुबाट भेटघाट हुनदेखि बच्न चाहान्छन् ।
यस्ता धेरै मान्छे, जसले आफू एक्लै रहने घोषणा गर्छन् ।
एक्लै रहनु, कुनै भेटघाटबाट टाढा बस्नु आदि–इत्यादि यदि स्वयंको निर्णय हो भने यो फाइदाजनक नै हुन्छ ।
अमेरिकाको सेन जोस युनिभर्सिटीका ग्रेगरी फिस्टले यसबारे अनुसन्धान गरेका छन् । फिस्ट यो निर्णयमा पुगे कि, स्वयंसँग समय बिताउनुले आफ्नो क्रियटिभिटीमा निखारता ल्याउँछ । यसले आत्मविश्वास पनि बढाउँछ । स्वतन्त्रताको सोच निर्माण गर्छ ।
तर, जब तपाई केही समय एक्लै बिताउनुहुन्छ भने पुराना कुरा सम्झेर आफ्नो सम्झना बलियो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ ।
अमेरिकाकै बफेलो युनिभर्सिटीका मनोवैज्ञानिक जूली बोकरको अनुसन्धानबाट फिस्टको दाबीलाई अझ बलियो बनाइदिएको छ ।
जूली भन्छन्– मानिस तीन कारणले घुलमिल हुनबाट बच्न खोज्छ । कुनै मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन् । जसकारण अन्य मानिससँग घुलमिल हुन चाहन्नन् । तर केही मान्छे पार्टी, समारोहादिमा जान चाहाँदैनन् भने अर्कोथरिका मान्छे, जो मिलनसार हुँदाहुँदै पनि एक्लै समय बिताउन मजा मान्छन् ।
एक्लोपनको फाइदा बताइरहँदा हिन्दु धर्मदेखि बौद्ध धर्मसम्म यस्ता धेरै कारण छन्, जसले एक्लै बसेर तप र चिन्तन–मनन गर्ने सल्लाह दिन्छन् ।
खासमा एक्लै रहँदा हाम्रो दिमाख आरामको मुद्रामा आउँछ । यस्तो अवस्थामा यादलाई बलियो पार्ने र राम्रोसँग सम्झाउने काममा मस्तिष्क जुट्छ । तर, जब हामी अन्य कसैसँग हुन्छौं भने त्यहाँ हाम्रो स्वतः बाँडिन्छ । शरीर र मस्तिष्कले पनि आराम पाउँदैन ।